Wednesday May 27, 2015 - 17:34:31 in Wararka by Super Admin
Markale wadanka ciraaq waxaa dib uga qarxay dagaallo malxmad ah oo u dhaxeeya muslimiinta sunniga ah iyo maleeshiyaad shiico ah iyo mareykanka oo isku dhinac ah.
Cadawga oo wajigabax iyo fadeexad dhan walba ah ay kasoo gaartay qabsashadii mujaahidiinta ee magaalada Ramaadi ayaa isku dayaya in uu sameeyo dhaq dhaqaaq sida uu doona ha ahaadee.
Wararka ka imaanaya wadanka ciraaq gaar ahaan gobolka Al-anbaar ee dhaca galbeedka Ciraaq ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ku dhaxmarayaan ciidamada mujaahidiinta dowlada islaamiga iyo maleeshiyaadka shiicada oo dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka saliibiyadda Mareykanka.
Duullaan ballaaran oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen duleedka waqooyi bari ee magaalada falluuja ayay ku dileen askar iyo saraakiil katirsan ciidamada xukuumadda dabadhilifka Baqdaad iyo maleeshiyaadka xashdiga loo yaqaan.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in sedax mujaahid oo kaxaynayay dabaabaad walxaha qarxa lagasoo buuxiyay ay wadada ugaleen kolonyo gaadiid ah oo cadawgu wateen halkaasi waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ay ku hoobteen tobaneeyo cadawga katirsan.
Wararku waxay sheegayaan in kolonyadii cadawga dhammaanteed ay baaba’day waxaana sii xigay weeraro fool ka fool ah oo mujaahidiintu ku qaadeen saldhig maleeshiyaadka shiicada ah ku lahaayeen mandiqadda naadim taqsiim.